Dowlada Mareykanka oo dacwado ku soo oogtay gabadh u basaasaysay dowlada Ruushka… – Hagaag.com
Dowlada Mareykanka oo dacwado ku soo oogtay gabadh u basaasaysay dowlada Ruushka…
Posted on 17 Luulyo 2018 by Admin in World // 0 Comments
Dowladda Maraykanka ayaa dacwado ku soo oogtay gabadh Ruushka u dhalatay oo 29 jir ah iyadoo lagu eedeeyay in ay u basaasaysay dowladda Ruushka, iyadoo galaangal ku yeelanaysay kooxo siyaasiyiin ah si ay xog uga hesho.
Maria Butina ayaa calaaqad dhaw la yeelatay xisbiga Jamhuuriga, waxayna noqotay qof u ol’oleeya xaqa ay dadku u leeyihiin in ay si sharci ah u haystaan hubka, sida ay sheegtay warbaahinta Maraykanka.
Waxaa lagu eedeeyay in ay la shaqaynaysay mas’uul sare oo ka tirsan xafiiska looga arrimiyo dalka Ruushka ee Kremlin-ka.
Robert Driscoll oo ah qareenka Butina ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in gabadhan macaamiisha ka midka ah aysan ahayn “basaasad” balse ay tahay ardayad barata xiriirka caalamiga ah ayna doonaysay in ay cilmigeeda ku raadsato xirfad iyo ganacsi.
Wuxuu intaas ku daray “in laga badbadiyay” dacwadaha lagu soo oogay gabadha isla markaasna “aysan jirin wax muujinaya in Butina ay raadinaysay galaangal ama ay wax u dhinto siyaasad ama sharci gaar ah oo Maraykanku leeyahay”.
Driscoll wuxuu sheegay in gabadhu ay bilooyin dowladda kala shaqaynaysay baaritaannada eedaymaha loo soo jeediyay.
Butina oo ku noolayd Washington ayaa la qabtay Axaddii waxaana xabsiga lagu hayn doonaa tan iyo inta laga dhagaysanayo dacwadeeda Arbacada, sida ay war qoraal ah ku sheegtay Waaxda Caddaaladda ee dalka Maraykanka.
Ku dhawaaqidda xiritaankeeda ayaa timid saacado uun ka dib markii Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu la kulmay dhiggiisa dalka Ruushka Vladimir Putin, isla markaasna uu Ruuska ka difaacay eedaymaha sheegaya in uu farogaliyay doorashadii madaxweynenimada ee 2016kii.